Ndị ọzọ na -eweta Chemicals na ụlọ ọrụ | China Ndị na -emepụta Chemicals ndị ọzọ
Calcium chloride bụ nnu inorganic, nke dị ka ihe siri ike ma ọ bụ mmiri mmiri. Calcium chloride siri ike bụ ihe na -acha ọcha, kristal n'ụdị flake, granule, pellet ma ọ bụ ntụ ntụ. Site na ọdịnaya mmiri kristal kristal dị iche iche, ọ nwere ike ịdị mmiri mmiri ma ọ bụ na -agwụ ike. Liquid calcium chloride bụ ihe na -enweghị agba, doro anya. Ebe ọ bụ na calcium chloride nwere ihe ndị dị ka mgbari ngwa ngwa, ike mwepụ, na -adọta mmiri site na ikuku na gburugburu ya, na -agbaze na oke okpomọkụ II.
Sodium Metabisulfite bụ ntụ ntụ ọcha ma ọ bụ odo kristal kristal ma ọ bụ obere kristal, nwere isi siri ike nke SO2, ike pụrụ iche nke 1.4, soluble na mmiri, ihe mmiri nwere mmiri bụ acidic, ịkpọtụrụ acid siri ike ga -ahapụ SO2 wee mepụta salts kwekọrọ, ogologo oge n'ikuku , a ga -etinye ya oxidized na2s2o6, yabụ na ngwaahịa ahụ agaghị adị ndụ ogologo oge. Mgbe okpomọkụ dị elu karịa 150 ℃, SO2 ga -emebi. Onye na -ahụ maka ịcha akwa (dịka candies, achicha, ome achara)
1. Dị ka onye na -ebubata ihe, onye na -anọpụ iche na mgwakota agwa, enwere ike iji soda bred mee achịcha achịcha achịcha, a ga -ejikwa ya mee ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị dị ka mkpa mmepụta si dị. 2. Enwere ike iji soda ndabere na nhicha ụlọ, dị ka ịsacha akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi, akwa na ngwa nhicha ndị ọzọ dịka arịrịọ si dị. 3. A na -ejikarị soda na -eme achịcha eme ihe na aquacultury iji dozie uru PH nke mmiri ọdọ mmiri 4. N'ime ụlọ ọrụ rọba, a na -eji ya emepụta roba na sponge. 5. Na ibi akwụkwọ na agbaji ...
Mmiri ammonium chloride
Ammonium chloride NH4CL granular White kristal ntụ ntụ ma ọ bụ granule; odorless, nụrụ ụtọ na nnu na jụụ. Ọ dị mfe ịgbagide mmiri mmiri, mmiri na -agbaze, glycerol na amonia, anaghị agbaze na ethanol, acetone na ethyl, ọ na -agbaze na 350 wee bụrụ acid na -adịghị ike na mmiri mmiri. Nke ọla nchara na ọla ndị ọzọ na-emebi emebi, ọkachasị, nchara ka ukwuu nke ọla kọpa, mmetụta na-adịghị emebi emebi nke ígwè ezì. Ngwa ọrụ ugbo ọkwa ammonium chloride: ọrụ ugbo ọkwa Ammonium ...
1. Nkwadebe Ngwọta: ọnụego ngbanwe nke PAC bụ 5%. Ọ pụtara igbari 5g PAC n'ime mmiri 100ml. 2.Mkpọsa mmiri: Mmiri ahụ bụ mmiri mgbata ma ọ bụ mmiri dị ọcha. 3. Kwụsa Oge: Oge a bụ nkeji 5-10 ma ọ bụrụ na ị kpaliri maka igbari. 4.Dosage: Nweta nlele mmiri wee gosi onunu ogwu kacha mma site na nnwale. 00: 0000: 23 Polyaluminum chloride. 1. Tinye Polyaluminum chloride No. 3. Dute mmiri Polyaluminum chloride na mmiri 3. Tinye mmiri mmiri n'ime mmiri 4. gwakọta mmiri mmiri na mmiri na ...
1.Ọkụ na -egwupụta ọkụ: uesd na -egbochi ọkụ n'ime ebe a na -egwuputa mmiri 2. Ọgwụgwọ mmiri: magnesium chloride n'onwe ya nwere ike wepu ihe na -adịghị n'ime mmiri ngwa ngwa, ọ naghị ebute mmetọ abụọ. ọ dabara nke ọma maka ịgwọ nnukwu nchekwa mmiri dị ncha. 3.Being dị mkpa inorganic akụrụngwa na chemical ụlọ ọrụ, ọ na -eji na -amị magnesium ogige dị ka magnesium carbonic acid, magnesium hydroxide na magnesium oxide, wdg .. 4 na metallurgy ụlọ ọrụ ọ na -eji pro ...